* Yakazara otomatiki kubva pakudya zvekudya kusvika pakupedzisira yanyungudutswa machira akaumburuka, hunyanzvi hwekugona, kumhanya kwakasimba, PFE inogona kusvika 95 uye pamusoro.
* Kugadzira kugona kubva 1500kg, iyo chaiyo yekugadzira dhodhi inoenderana neakawedzera extruder muchina uye unonyungudika wakarohwa nefomu saizi.
2. Rudzi Rwekugadzira: Vertical Blow Downward
4. Yakashandiswa Matombo: PP
5. Chigadzirwa Kubhiti: 1600MM
6. Kugadzira Kugona: 1500KG / 24Hours
7. Yakagadzirwa naMax. Speed: 15M / Minute
8. Yese Simba: 600KW
9. Machine Dimension (LXWXH): 14X5.5X4.5M
1. 90 Koriera Imwe Chekuwedzera: 1set
3. Mhepo Pre-kupisa Chipenga
6. Net Charger ne Hydraulic Ruviri Piro Isiri-Stop Type
7. Electrostatic Electret Kifaa
8. Servo isingadi uye yekucheka mudziyo
9. Roots blower uye kuyamwa Fan system
10. Kuita otomatiki uye Kudzoreredza Mudziyo
11. Motorola PLC inodzora system.
1. Kuisa Vhidhiyo Tsigiro, uye vhidhiyo kutaura kwekukurukurirana mumamiriro ekugadzirisa ane dambudziko diki.
2. Mahara Spare Zvikamu: Dzimwe nzvimbo dzeWorn kunge chinobatanidza, pombi yekudziya, nezvimwe.
3. Yese Muchina Waranti: rimwe gore